Ciyaaraha lamaanaha: ciyaaraha ugu xiisaha badan ee lagu raaxeysto | Ragga Stylish
Nolosha galmada ee wanaagsan waxay ka caawin kartaa lammaanaha inuu noqdo mid firfircoon oo faraxsan muddo dheer. Dadka muddo dheer wada joogay ama doonaya inay la kulmaan waxyaabo cusub, ayaa jira labo kulan. Thanks to ciyaarahan, xiriir ka dhexeeya labada ayaa la dhisi karaa si loo wanaajiyo daqiiqado isku xirnaan iyo in laga caawiyo sidii looga gudbi lahaa daqiiqado jilicsan ee xiriirka.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ciyaaraha lamaanaha, astaamahooda, noocyadooda iyo faa'iidooyinkooda.
1 Faa’iidooyinka labada lamaane
2 Ciyaaraha lamaanaha
2.1 Heerkulka galmada oo la xidho
2.2 Laadh iyo dhadhan
2.3 Duugista ciyaaraha lammaanaha
2.4 Qiyaasta awoodda
Faa’iidooyinka labada lamaane
Galmadu ma caawin karto dhinacyo badan oo lammaanaha ah mana aha oo kaliya inay soo saarto raaxo. Faa'iidooyinka galmada ay na siiso sida ku xusan daraasadaha sayniska waxaan haynaa waxyaabaha soo socda:
Waxay ka caawisaa kahortaga walwalka waana yareysaa. Dhamaanteen waxaan leenahay nolol murugsan tanina waxay naga caawin kartaa inaan horumarino.
Dib-u-cusbooneysiintu waxay ka caawisaa lamaanaha inay dareemaan da ’yar.
Cimri dheerey nolosheena.
Waxay wanaajisaa caafimaadka wadnaha.
Waxay hagaajineysaa isku kalsoonaanta iyo niyadda si loo sii daayo endorphins.
Waxay ka caawisaa inuu sii adkeeyo nidaamka difaaca jirka
Sidaad arki karto, dhammaantood waa faa'iidooyin. Sidaa darteed, labada lamaane waxay gacan ka geysan karaan hagaajinta tayada galmada. Ciyaarahan is barbar socda badankood waa ciyaaro sariirta lagu ciyaaro. Xiriirka galmadu runtii waa wax fiican, laakiin kolba waqtiga ka dib oo labada isqabaa ay bilaabaan inay yeeshaan dareen badan, dhalanteedkaa wuu lumay. Tani waa waxa loo yaqaan daayo ololka xamaasadda. Khubaradu waxay ku talinayaan in lammaanuhu hal-abuurnimo yeeshaan si aanay taasi u sii socon.
Aan aragno waxa ay yihiin labada lamaane ee ugu muhiimsan ee kaa caawin kara inaad dib uhesho ololka hamiga.
Heerkulka galmada oo la xidho
Mid ka mid ah waxyaabaha caanka ah ee gogosha ayaa ah dareenka la ciyaarista jirkeena. Si tan loo sameeyo, si fudud u yeelo baraf baraf ah ama cab cabitaan kulul. Waxaan si toos ah ugu codsan karnaa barafka barafka qofka aan dooneyno inaan kicinno, ama afka u galno xoogaa (sida cabitaanka kulul), si marka aan u tababbarayno galmada afka ama leefleecayo dareenka ayaa ka duwan, mahadsanid carrabka kulul ama qabow.
Maxbuusku waa mid kale oo ka mid ah ciyaaraha lammaanaha kacsiga leh, waa nooc ka mid ah ka-xiridda xubin ka mid ah lamaanaha si aysan u dhaqaaqi karin. Ciyaartan, qabashada guud ahaan waa loo ekaysiiyaa.
Mid ka mid ah labada xubnood ee lammaanaha ayaa gacmaha ka xirnaa (iyo cagaha xaalado badan) wuxuuna ku jiray naxariista qof kale oo mas'uul ka ahaa bixinta farxadda. Xaaladdaani waa mid dhiirrigelin badan u ah dad badan.
Laadh iyo dhadhan
Ciyaarta laadhuuga waa kala duwanaanta ciyaartii hore. Waxay ka kooban tahay laba xubnood oo lammaane ah oo lambarro kala duwan loo qoondeeyey. Mid waa laba lambar xitaa kan kalena waa iska caadi. Ka dib isdabamarinta laadhuuga oo guuleystaha uu xirnaan doono 5 daqiiqo oo uu la baashaalo lamaanaha.
Haddii dareenka kuleylka iyo qabowgu aad u fiican yahay, markaa dhadhanka ayaa wanaagsan. Faa’iidada kulankaan ayaa ah inaad la joogi karto qofka aad rabto isla mar ahaantaana aad ku raaxeysan karto dhadhanka shukulaatada, strawberries ama jalaato.
Waad beddeli kartaa dhadhanka qof walba, in kasta oo fasalada qaarkood u isticmaalaan shukulaatada si ay u daboosho qaybo ka mid ah jidhka oo ay ugu nadiifiso carrabka. Wuxuu sidoo kale la cunaa strawberries iyo champagne lamaanaha si erotic ah. Muhiimadu ma aha inaad isticmaasho gacmahaaga, laakiin wax walba oo kale.
Duugista ciyaaraha lammaanaha
Duugistu had iyo jeer waa mid raaxo leh oo nasasho leh, aad ugu habboon in la kordhiyo kacsiga galmada oo loo abuuro jawi ku habboon galmada. Duugista waxaa lagu samayn karaa isla sariirta qofkii duugayana waa inuu noqdaa mid waji gabax leh oo dareemaya raaxo.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo saliid ah, oo leh kaladuro kala duwan, oo soo saara dareemo kala duwan. Taabashada, urta iyo dareemida saliidu aad bay u kicin kartaa oo duugistu waxay ku habboon tahay in sariiraha lagu ciyaaro.
Bambooyinka galmada waa casiir sariirta jiifa oo dhiirrigalin kara raaxada. Tani waa ciyaar fudud oo ku lug leh qaadashada saacad iyo dejinta wakhti go'an oo aan laguu oggolaan karin inaad gasho. Tusaale ahaan, haddii ay kuu sheegaan in 20 daqiiqo dhex-dhexaadku uusan u qalmin, laakiin kaliya salaaxida, dhunkashada, qaniinyada, iwm. Waa inaad sugto waqtiga aad ka gudbayso.
Ciyaarta warqaddu waxay noqon kartaa mid ka mid ah waxyaabaha ugu kacsiga badan lamaanaha. Ciyaar aad u kacsan oo kicin kara dareenkaaga. Waxay ka kooban tahay qaadashada laba dhalo oo ku dhex ridaya waraaqo taxane ah. Shaqallo kala duwan oo la xiriira dabeecadaha galmada iyo kuwa xiisaha leh ayaa lagu qoraa xaashi kasta, sida dhuuqmada, leefleeca, qaniinyada, iwm. Dhalada kale waxaa ku jira dukumiinti ay xubno ka yihiin jirka. Isku darka labada warqadood ayaa kuu sheegi doona waxa aad ku samaynaysid lamaanahaaga si uu u dareemo farxad dhab ah.
Ciyaar kale oo quraafaad ah ayaa indho shareer ah, maxaa yeelay marka uusan qofku wax arki karin, dareemayaasha kale ee jirka ayaa la xoojiyaa. Tani waa mid ka mid ah kulamada lamaanaha ugu fudud. Indho shareer, labada lamaane ha u gutaan shaqadooda si ay noo qanciyaan. Khayaali ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa ciyaartan, iskudarka ciyaarta maxbuuska ayaa ah mid ku habboon.
Waxaa jira ciyaaro labo lamaane ah oo aad waxbadan ku siin karto male-awaalka. Waxaa jira ciyaar loo yaqaan dagaalka. Ciyaartaani waxay sariirta u rogi kartaa giraan dagaal. Looma baahna rabshad halkan, laakiin waxay noqon kartaa madadaalo. Labada xubnood ee lammaanaha ahi waa inay dharka iska saaraan oo ay yeeshaan barkinta ay u adeegsanayaan inay ku bilaabaan dagaalka. Maaha ku xanuujin laakiin inaad ku raaxaysato wakhti fiican. Tani waxay abuuri kartaa jawi deggan oo aakhirka ku dhammaada jacayl halkii dagaal ka dhici lahaa.
Ciyaarta lamaanaha ugu dambeysa waxaa la yiraahdaa "muxuu afkayga dhadhamiyaa?" Qalabkan gogosha ayaa aad ugu habboon in lagu daro ciyaaraha indhoolayaasha. Sidoo kale, kolka labada xubnood ee lammaanaha midkood indhaha ka xidho, ka kalena afka u galiyo cunnooyin kala duwan: shukulaatada, jalaatada, miro macaan, khamri, kareem, IWM
Ujeeddadu waa in qofka indhuhu xidhan yahay uu maleeyo waxa ku jira afka kale ee afkiisa. Haddii aysan sax ahayn, markaa qofka aan indhaha laga xirin wuxuu jidhkiisa ku marin doonaa cunto, qofka maqanna waa inuu leefleexaa oo aanu jidhka gacmihiisa ku nadiifin.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto ciyaarta lammaanaha iyo faa'iidooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Ciyaaraha lamaanaha
Farqiga udhaxeeya labada jinsi iyo kuwa isu galmooda: waa maxay mid waliba?